2007-04-30 @ 16:38 in Politika
Mpanara-baovao aho indrindra fa ny vaovao mitranga eto Madagasikara. Efa tsy vaovao intsony ny nitranga tany Toliary fa efa maresaka indray aloha. Rehefa tafiditra amin’ny lalina tahaka izao indray ny firenena indrindra fa amin’ny fihetsika tsy dia mahomby loatra dia mijery izay ataon’ny ankolafin-kery rehetra ihany koa aho ary manana ny tiako ambara manoloana izany.
Voalohany, niandry fanambarana avy amin’ny fikambanana na antoko na vondrona na zavatra hafa aho hihaino izay heviny manoloana iny raharaha Toliary iny ka saiky tena ketraka tanteraka. Toa mbola hitsofoka amin’ny tsy mety kokoa ny andaniny sy ny ankilany ary toa tsy misy loatra mandray andraikitra mitsangana hitsabo ny fery mianjady amin’ny maro amin’izao fotoana izao. Fifanilahana andraikitra sy teny tsy hentitra loatra hampitsahatra ny lonilony no hany hita aloha hatramin’izao. Tsy naheno fanambarana loatra tamin’ny haino aman-jery aho ary tsy nahita fanambarana tamin’ny gazety ihany koa na dia iray aza.
Ny radio nasionaly malagasy no nahenoana fotsiny miserana fa tsy voarakitra tamina taratasy ho hitan’ny be sy ny maro fa tsy mankasitraka iny zava-nitranga tany Toliary iny ny Olobe ahitana ny foko 18 misy any Toliary. Milaza tsy fankasitrahana ihany koa ny avy amin’ny fiangonana enina dia ny Ekar, ny Fjkm, Ny Flm, ny Advantista, ny Anglikana ary ny Ortodoksa. Raha ny tokony ho izy dia tsara novakiana manontolo ny fanambarana nataon’ireo vondrona tsirairay ireo raha nisy izany. Nisento ihany aho rehefa nahita fa anisan’ny nitsangana ny fiangonana satria mpitaiza vahoaka izy ireny saingy mbola tsy ampy ilay izy amiko fa tokony hivondrona manokana mihitsy ary mijoro hampitony ny raharaha. Moa tsy ny zava-mitranga toy izao no tena ahalalana ny fiangonana kristiana eto Madagasikara ?
Fa ny eo amin’ny mpanao politika no tena tsy naharenesana na inona na inona afa-tsy hevitra mahavalalanina ihany. Ny filoham-pirenena moa dia manameloka ny mpanao politika (indrindra ny mpanohitra) amin’ny fanaovana ny tanora ho fitaovana politika hitadiavan-tseza indray. Nefa raha tena misaina izy dia tokony hihevitra izay fototry ny olana nahatonga izao fihetsika mamohehatra eo amin’ny samy mpiray tanindrazana izao. Efa tsy sasatra aho nanambara tany aloha tany fa ity delestazy ity no ho fositra hahavoa azy. Miendrika tsy firaharahiana manko ny tsy mba nitadiavana vahaolana hatry ny ela fa aina sy fototry ny fampandrosoana ny angovo. Toa propagandy politika fotsiny no nataony fa tsy hita izay tena mivaingana hatramin’izao. Nandefa gropy handefasana jiro tany Toliary ny fitondrana dia Antananarivo indray no tapatapa-jiro indrindra fa tamin’ny andron’ny omaly alahady aloha. Famonoana afo ihany izany no nataony.
Ny tena meloka kosa dia ny avy amin’ny mpanohitra nanome vahaolana tsotsotra tamin’ny alalan’ny fankahalana. Izaho manokana kosa tsy mihevitra ilay izy ho vahaolana na oviana na oviana fa mametraka ny nataony ho fitaizana ny tanora hankahala merina foko iray hatrany. Olona iray ve no tsy tiana dia antokon’olona manontolo no hohelohina ? manaraka izany dia tezaina hatrany fa mpiavy izay olona tsy avy ao an-toerana na dia samy Malagasy izao ihany aza. Izany hoe mbola manjaka soa aman-tsara ny politikan’ny foko nampiharin’ny Jeneraly Gala zato taona lasa izay na dia efa nahaleo tena aza ny firenena. Izay fomba fihevitra manao ny sasany amin’ny Malagasy mbola ho mpiavy izay dia manaporofo fa mbola ho lavitra ny fandrosoana raha ny toe-tsaina iainana amin’izao fotoana izao. Iza no ho sahy hanameloka izay filazana hoe « mpiavy » eo amin’ny samy Malagasy eto Madagasikara izay ? Ny firenenkafa aza efa izao tontolo izao no sehatra iainany !
Be dia be ny teny tian-kambara fa aleo aloha hatsahatra kely handinihana azy tsara. Ny hamintinana ny resaka dia izao : tsy misy sahy manameloka ny toe-javatra ny rehetra fa mifanome tsiny fotsiny. Rehefa tsy melohina ny tsy firaharahiana ny vahoaka amin’ny ankapobeny hampiaiky ny eo amin’ny fitondrana ny tsi-fetezany hamaha amin’ny fomba hentitra ity delestazy ity dia tena mpanohitra tsy izy no misy eto Madagasikara. Meloka avokoa ny vondrona sy ny fikambanana rehetra tsy sahy miteny fa tena tsy nety ary fady ny fanenjehana vondron’olona noho ny volo-kodiny na noho ny mahangita mahaolioly na mahatso-bolo. Fahadisoan’ny fitondrana ihany koa ny nampiasana ny miaramila avy hatrany nefa tsy natao hitandro filaminana ny raharahan’izy ireny fa hiaro firenena ka izay mifanandrina aminy dia antsoina hoe fahavalo avokoa fa tsy hoe vahoaka. Mbola mila ofanina manokana ny miaramila hitandro ny filaminana fa lasa manapoaka basy amin’ny tsy antony.